Iji Tweet ma ọ bụ Ọ bụghị Tweet | Martech Zone
Ntuziaka onye na-amalite iji kpebie ma Twitter ọ dị mma maka atụmatụ dijitalụ gị
Ha ‘enwetaghị’ ndị ọrụ ha! Mbupu ala! Ọ gharịị! Ọ bụ ịnwụ!
Ndị ahịa - na ndị ọrụ - enweela ọtụtụ mkpesa banyere Twitter na nso nso a. Agbanyeghị, n'ihe karịrị nde ndị ọrụ iri atọ na atọ na-arụ ọrụ n'ụwa niile, usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-eme nke ọma. Ojiji nwere gbasiri ike maka ebe atọ kwụ ọtọ, na enweghị onye na-asọmpi doro anya n'ihu, Twitter ga-adị maka ọdịnihu n'ọdịnihu. Mana, ọ kabeghị aka maka ụdị ọ bụla. Ọwa ọ bụla nwere ike na adịghị ike ya, yabụ mgbe ị na-atụle Twitter maka atụmatụ dijitalụ nke ika gị, buru n'uche ihe ọwa karịrị: nkwukọrịta ozugbo, ozugbo, na ndị na-emetụta ya.
Etu esi eji ike Twitter
Direct nkwurịta okwu - Na-emeso Twitter dị ka ọwa mgbasa ozi dị mfe na-ahọrọ ileghara ike ya kachasị anya: Communicgwa ndị na-ege gị ntị okwu n'otu n'otu. Chọọ ohere iji ruo ma malite mkparịta ụka na ndị ahịa. Ọ bụrụ na ịrị elu nke Alexa, Siri, na azụmahịa mkparịta ụka na-egosi anyị ihe ọ bụla, ọ bụ na ndị mmadụ na-eji na-ekwu okwu na ụdị ndammana. Yabụ, gakwuru ha n'ụzọ ebumpụta ụwa na chanel ewubere maka mkparịta ụka.
Ozugbo - Mgbọrọgwụ Twitter gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na akwụkwọ akụkọ. Co-guzobere Jack Dorsey ọbụna Ebe e si nweta ndị nta akụkọ site na ikpo okwu nke ikpo okwu. Jiri nke a ma jiri Twitter maka akụkụ akụkọ akụkọ banyere akara gị: gbado anya na ọkwa, ihe omume, na akụkọ na-aga n'ihu.
Ndị na - emetụta ya - Industrylọ ọrụ ọ bụla nwere onye ndu echiche, na Twitter na-eme ka ọ dịrị ya mfe iru ha. Ndị isi na-eche echiche na-adịwanye mkpa nye ndị na-azụ ahịa: n'eziokwu, 49% nke ndị ọrụ twitter dabere na nkwenye site na mmetụta. Ya mere, gbasoo ha. Jụọ ha ajụjụ ozugbo ma wulite mmekọrịta gị na ụzọ ị na-enweghị ike isi pụọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Yabụ, Twitter ọ kwesịrị ya? Ọ nwere ikike pụrụ iche maka nkwukọrịta kwụ ọtọ, echiche nke ịbịaru nso, na ikike dị ukwuu maka ịmịpụta influencer. Lelee ihe mgbaru ọsọ gị anya: ọ bụrụ n'ịchọta ụzọ iji jikwa ike Twitter, ọ nwere ike ịbụ akụkụ dị ike nke atụmatụ dijitalụ gị.
Kedu ihe metrik Twitter ị kwesịrị ị Paya ntị na ya?
Ọ dị mma, ị kpebiri iji Twitter dị ka akụkụ nke atụmatụ dijitalụ nke ika gị. Ugbu a gịnị? Ọfọn, ịkwesịrị ịchọpụta otu esi agbaso arụmọrụ. Twitter na-enye ụdị ohere ịnweta ụfọdụ ọmarịcha siri ike nchịkọta na saịtị ya, mana ọ dị mfe iji ọnụọgụgụ ọnụọgụ niile. Iji chọpụta nke KPI ga-elekwasị anya na ọ dị mkpa ịhapụ ha site na ebumnuche ọwa gị.
Kedu ihe ị chọrọ iji Twitter maka?
Direct ahịa ọrụ? Sochie usoro a:
Nkezi Nzaghachi Oge - Nke a ga - abụrịrịrịrịrịrị na ụkpụrụ ụlọ ọrụ, mana karịa ụkpụrụ ndị ahụ bụ ụzọ dị egwu iji mee ndị ahịa gị obi ụtọ. JetBlue choputara nke a. The ika bụ anọgide n'etiti ụgbọ elu na-aza ọsọ ọsọ ma ọ bụ a na-amatakarị maka mbọ ya site na ụlọ ọrụ ndị Fans ya.
Zaghachi ọnụego - Ọ bụghị ajụjụ ọ bụla ga-adabara ịzaghachi, mana ọ dị oke mkpa iji nyere ndị ị nwere ike. Nke a bụ mgbe atụmatụ ịbawanye ụba nwere ike ịba uru.
Obi - Nke a na-enyere aka igosi ma ọ bụrụ na a na-agwa ndị gbara ajụjụ siri ike ajụjụ / ọtụtụ ngwaọrụ na-enye gị ike soro ihe ị na-aza ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị na-aza naanị aha ndị ziri ezi, ọ nwere ike ịbụ oge ịgbanwe.
Mgbasa Mgbanwe? Sochie nke a:
Number nke Tweets vs Number nke-eso ụzọ - Kewaa ndị na - eme ihe ike na njirisi abụọ a ma rara ihe onwunwe gị anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị: onye na - agbasakarị ndị na - eso ụzọ ole na ole nwere ụdị mmetụta dị iche karịa onye na - anaghị ahụkarị ọtụtụ ndị na - eso ụzọ.
Mgbasa ozi iji ruo ndị kiriri ọhụụ? Sochie usoro a:
Hashtag ojiji na kwuru - Trachọpụta ugboro ole ejiri hashtag mee ihe, yana akara na / ma ọ bụ mkpọsa mkpọsa, bụ ụzọ dị mma iji tụọ mgbasa ozi gị.
Ọkacha mmasị - Ha nwere ike ọ gaghị eme ọtụtụ ihe maka ire ere mmadụ, mana ha bụ ụzọ dị mma iji tụọ ihe ndị na-ege gị ntị masịrị. Chee ya dika "ezigbo oru". Ọdịnaya ahụ masịrị ha, yabụ gosi ha karịa ya.
Retweets - Site na ntughari, ha ekwuola, sị, “Ihe a masịrị m, echekwara m na ndị ọzọ ga - eme”. Nke a bụ kpọmkwem otu Twitter nwere ike isi nyere aka gbasaa iru gị na ndị na-ege ntị sara mbara karị ka ịlele soro retweets wee chọpụta ụdị ọdịnaya ndị na-ege gị ntị nwere mmasị ịkọ.
Nzaghachi - Ndị a dịkwa mma ịkọwara ndị ahịa gị ọrụ, nke ga - enyere aka ịkwado mkparịta ụka ahụ na ndị na - agba gị.
Oge ụbọchị / ụbọchị izu - Nke a nwere ike ịbụ ihe dị mfe ịghara ileghara anya. Ndị na-ege ntị dị iche iche nwere ụdị mgbasa ozi dị iche iche, ịchụso oge na ụbọchị kachasị dị irè maka itinye aka dị oke mkpa mgbe ị na-edozi ọdịnaya Twitter gị.
Na-akwọ ndị ahịa na saịtị gị? Sochie usoro a:
URL pịa na okporo ụzọ - Twitter nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji bulie okporo ụzọ, hụ na ị haziri ụzọ iji soro URL pịa URL site na iji Google Analytics ma ọ bụ ngwaọrụ yiri ya. Na-enyocha ego ọdịda peeji nke ibiaghachi iji hụ na okporo ụzọ na-eme ụkpụrụ gị.
Ugbu a, ọ bụghị naanị usoro ndị a ka ị ga - enyere aka: ọ dabere n'ezie n'ihe mgbaru ọsọ ị depụtara. Mana ọ bụrụ na ị kpebie igwu egwu na ike twitter nke mgbasa ozi, ngwa ngwa, na ndị na-emetụta ihe, usoro ndị a bụ ebe dị mma ịmalite.
Tags: nkezi oge nzaghachiọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọọnụ ọgụgụ nke tweetsezipụtweettweet ctrTwitternchịkọta twittertwitter pịa-site ọnụegotwitter ọkacha mmasịụmụazụ twitterHashtag twittermmetụta twitterAhịa Twittertwitter kwuruigwe metrik twittertwitter zaraọnụego zaghachi twittermmetụta twitteroge nke twitteroge twitter n'izu